Grenfell Tower: Tirada dadka dhintay, kuwa la la'yahay oo gaadhay 58 - BBC News Somali
Grenfell Tower: Tirada dadka dhintay, kuwa la la'yahay oo gaadhay 58
17 Juunyo 2017
Image caption Qaar ka mid ah dadkii Theresa May kula kulmay xafiiskeeda 10 Downing Street
Booliska ayaa sheegay in wadarta dadka la la'yahay ama ku dhintay dabkii lagu hoobtay ee qabsaday daarta Grenfell Tower ee ku taallay galbeedka London ay gaadhayso 58 qof.
Stuart Cundy oo ah taliye ka tirsan booliska ayaa yidhi 'tiradaasi way kordhi kartaa'. BBC-duna waxay ogaatay in wadarta guud gaadhi karto 70 qof.
Hawlaha baadhitaanka guryaha daartay gubatay ka koobnayd ayaa la filayaa in ay socodaan todobaad dhan, ayuu intaa ku daray taliyuhu.
Dhanka kalena, Ra'isal Wasaare Theresa May ayaa qirtay in gargaarka loo fidiyey 'saacadihii u horeeyey' qoysaska ku wax yeeloobay dabku aanu ahayn 'mid sidii la filayey ah'.
Warbixintaasi waxay soo baxday ka dib markii May ay ku la kulantay xafiiskeeda ku yaal Downing Street qaar ka mid ah dadkii ku guryo beelay dabkaa iyo dad kale oo mutadawiciin tii caawinayey ah.
Markii ay ka soo baxeen xafiiska ra'isal wasaaraha, ayaa qof u hadlay dadkaas oo hadal kooban u jeediyey warfidiyeenku sheegay in ay mar dambe soo saari doonaan warbixin dhamaystiran.
'Warbixintaa waxaanu soo wada saari doonnaa bulshadii ku wax yeelowday, bulshadaanu soo wada saari doonaa' ayuu yidhi waxaanu intaa ku daray 'Ra'isal wasaaraha waxaanu la yeelanay kulan laba saacadood iyo badh socday, waxaanan ka wada hadallay waxyaabaha loo baahanyahay iyo waxa laga filayo'.
Ra'isal Wasaare May waxay warbixinteeda iyadna ku tidhi 'run ahaantii, taageeradii iyo xogtii la siiyey qosysaska ku waxyeeloobay dhibaatadan saacadihii u horreeyey ee masiibadan murugada lihi dhacday may ahayn kuwo mug leh'.
May waxa kale oo ay sheegtay in ay rajaynayso in ay maalmaha soo socda gudahooda ku shaacin doonto magaca garsooraha gudoomiyaha u noqon doona guddida baadhi doonta wixii shilkaa dhaliyey. Gudidaasina waxay warbixinteeda u gudbin doonaan ra'isal wasaaraha.
Waxay sidoo kale fartay dawladaha hoose in ay baadhitaano xaga badbaadada ah oo dhamaystiran ku sameeyaan dhismayaasha dhaadheer ee la midka ah kan gubtay ee ku yaalla goobaha ay maamulaan.